Okwamanje, kunezinhlobo ezahlukene izinhlelo ezishintshayo izinqubo izinkampani zokuhweba. Isofthiwe is njalo ngcono, ukusebenza enwetshiwe ukucupha entsha ukunikela isethi ephelele amathuluzi ukuqaliswa ezimali kanye nokulawula izinhlangano kwezohwebo.
1c ukuhweba ukuphathwa 7, basebenzisa izindlela ezihlukahlukene ukulibona kwezentengiselwano, automates eziningi izinqubo:
- ukuqhuba ukuphathwa kanye kwezimali zezimali ibhizinisi ngokuhlukana;
- Thatha akhawunti ye izinhlangano ezingokomthetho ezihlukahlukene;
- ukugcina irekhodi amaqembu, ezikhona, bese ukhetha indlela uvele ukhohlwe ukuthi kukhona ebiziwe;
- Sigcine imibhalo imikhiqizo inkampani yabo siqu sika, kanye izimpahla ezenziwe ekusebenziseni ngokuhlukile;
- ukwenza yokubhaliswa ukuthenga yokuthengisa;
- enze kokuqala ukugcwaliswa dokhumenti Imodi othomathikhi, esekelwe idatha ngaphambilini kwetfulwa;
- Dala imibhalo eyinhloko ;
- ukugcina amarekhodi zasemizaneni Amakhasimende kanye nabahlinzeki bethu;
- ukwakha yokuthengisa kwale ncwadi imodi othomathikhi futhi ukukhipha invoice;
- Gcina irekhodi izimali ehhovisi ibhokisi, kanye akhawunti lamanje;
- Sigcine imibhalo imali kanye ukulawula ukubuyiswa kwemali yabo;
- ukugcina irekhodi ukubuya izimpahla;
- ikhono ukuhlanganisa 1c isofthiwe umkhiqizo Julayi 7 Accounting ukuhweba nokunye okuningi.
Okwamanje, amabhizinisi kufanele bafunde ukusebenza 1c ukudayiswa 7 7 etholakalayo inguqulo ebuyekeziwe ye-1c umkhiqizo, okungukuthi - "1c: Trade Ukuphathwa 8". Ngokungafani inguqulo yangaphambilini, ikhambi entsha ivumela ezishintshayo ezimali hhayi kuphela, kodwa usizo futhi ngempumelelo kubo bonke amabhizinisi ephethwe, kuhlanganise CEO.
Ukwengeza omusha sici "Umbiko Manager", kanye nokuhlaziywa emidlalweni yama-isimo futhi uthole imibhalo enemininingwane, uyakwazi ukuhlinzeka abasebenzi executive ulwazi oluphelele kakhulu isimo sangempela inkampani.
Inguqulo 8 ivumela elula umsebenzi nsuku zonke: ukulungiselela imibhalo, ukuphatha kuhanjiswa kwemphahla kanye kumiswa amanani, thatha oda futhi ulawule ukukhishwa kwabo, ukuphatha izimpahla, ukuthenga kanye supply. Ngaphezu kwalokho, le nguqulo ivumela ukuhlela ngempumelelo lenkampani, usebenzisa ulwazi isikhala esisodwa.
Ngaphezu zonke izici inguqulo yangaphambilini 7.7, isixazululo esisha asondele kakhudlwana yokubhaliswa langempela izidingo izinhlangano kwezohwebo. Ngezansi kukhona ezinye izici ezintsha, inguqulo 8 litholakale kubasebenzisi:
- izinto ezinhlelweni zokuthenga ukuhlela, kanye nezinkokhelo;
- nokwenza esitokisini ibhizinisi ngokuhambisana ukuletha kulindeleke;
- ukulawula ukuhambisana amapulani, ukutholakala ezezimali, kanye isiyalo ukudiliva kanye nezinkokhelo;
- Ukuxilongwa kahle okulawula;
- Ukudalwa "abike kwinhloko" kwimodi okuzenzakalelayo;
- ithuba lokuhlinzeka ezihlukahlukene izaphulelo kanye eziseceleni amaqembu ahlukene amakhasimende;
- ukudalwa lenqwaba imibiko.
Nokho 1c Onjiniyela abayekanga empumelelweni izuzwe nokuthuthukisa ukucupha ezintsha kanye izinguqulo izinhlelo abaziwayo. Ngokwesibonelo, 1c ukuphathwa ukuhweba 11 0 7 liqukethe ngcono eziningi ngoba ngokunethezeka ukusebenza lwemibhalo, kalula obusebenzayo amanani imfundo, izindlela ngcono oda umsebenzi kanye nezinye izici eziningi ewusizo.
Uma usuvele usebenzisa ezinye nguqulo ye 1c imikhiqizo ukuhweba ukuphathwa, ungahlala uthuthukele uhlelo zanamuhla nge ekulondolozweni base ulwazi.
Esikhathini esitolo inthanethi 1c Market uzothola izinguqulo eziningana 1c ukuhweba ukubaluleka okuhambelana ukusebenza kwabo. ikhathalogi Kalula ngencazelo kanye izindleko zohlelo kuzokuvumela ukuqhathanisa izinguqulo eziningi futhi ukhethe lokho okudingayo ukuze ibhizinisi lakho.